यि हुन् वर्षाको समयमा सुरक्षित रहने उपाय ? - समायोजन खबर
यि हुन् वर्षाको समयमा सुरक्षित रहने उपाय ?
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले मनसुन र वर्षाको समयमा सतकर्ता र आवश्यक सुरक्षा अपनाउन सचेत गराएको छ । लगातार केही दिनदेखि परिरहेको झरीका कारण ठाउँठाउँमा बाढीपहिरो आउनुका साथै ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । प्रशासनले पनि ‘हाई अलर्ट’ मा रहन सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
देशैभरि मनसुन सक्रिय रहेकाले बाढी, डुबान र पहिराका जोखिमयुक्त बस्तीहरु पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा जान सुझाएको छ । त्यस्तै यो समयमा अत्यावश्यक सामग्री (खानेकुरा, कपडा, औषधि, पानी) आदिको जोहो गरेर सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्छ ।
केन्द्रले बालबालिका, महिला ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध तथा अपांगता भएका र उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता दिन भनेको छ । मौसम पूर्वानुमान, सम्भाव्य जोखिम तथा सुरक्षाका उपायहरुको बारेमा सरोकारवालाहरु सबैले जोखिममा रहेका परिवारहरु तथा बस्तीहरुलाई समयमा नै सूचित गराउनुपर्छ । त्यस्तै बाढी आएको बेलामा माछा मार्ने, पौडी खेल्ने, काठ दाउरा संकलन गर्ने र गाईबस्तु चराउनेजस्ता काम नगर्न सतर्क गराएको छ ।
२०७६ असार २७ गते साँझ ७ :२९ मा प्रकाशित